5 siyaabood oo aad ugu wanaajiso boggaga shuruudaha xawaaraha Google | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/5 siyaabood oo aad ugu wanaajiso boggaga shuruudaha xawaaraha Google
5 siyaabood oo aad ugu wanaajiso boggaga shuruudaha xawaaraha Google
Bishii Maajo 2018, Google waxa ay soo saartay Lighthouse 3.0, oo ah nooc la cusboonaysiiyay oo ah qalabkooda isha furan ee xisaabinta tayada iyo xawaaraha bogagga shabakadda. Lighthouse 3.0 wuxuu keenaa xulashooyin cusub oo wax soo saar ah oo loogu talagalay warbixinnada, laakiin sidoo kale tiro isbeddello ah oo ku saabsan habka ay u cabbirto xawaaraha goobta iyo waxqabadka, sida soo bandhigida Rinjiga Contentful First sida cabbirka waxqabadka iyo xawaaraha iyo miisaannada cusub ee xisaabinta waxqabadka.
Iyo ilaa May 2018? Google ayaa siidaayay xitaa isbedelo kale. Taasi waa sababta aan u wadaageyno shan siyaabood oo aad u wanaajin karto boggaaga maanta.
Maxaad u hagaajinaysaa xawaarahaaga goobta hadda?
Lighthouse ayaa sii waday inuu horumariyo sanadka tan iyo markii 3.0 hoos loo dhigay. Google ayaa dhawaan ku dhawaaqday in ay ka shaqaynayso "Platform Packs" ee Lighthouse, taas oo tijaabiyeyaashu ay ku heli karaan talooyinka hagaajinta xawaaraha kuwaas oo u gaar ah CMS iyo koodka maktabadaha ee lagu isticmaalo goobahooda.
Google ayaa si tartiib tartiib ah u kordhinaysay muhiimada xawaaraha goobta sida jaangooyooyinka qiimaynta tan iyo markii ugu horaysay ee la soo bandhigo tusaha mobilada-koowaad ee 2016, markaa waxaa caqli gal ah in fiiro gaar ah loo yeesho jaantusyadan iyo isbeddelladan. Google ayaa soo saartay ku dhawaad ​​62 cusboonaysiin algorithm tweak ah intii lagu jiray celceliska toddobaad 2018, si loo hubiyo inaad si fiican u darajeyso waxay noqoneysaa dhaqan firfircoon oo sii kordheysa. Oo marka la eego cusaybka cusub ee tusaha-koowaad ee moobiilka, iyo sidoo kale saamayntiisa aan loo meel dayin ee taraafikada mareegaha, waxa ay macno samaynaysaa in badiba hagaajinta algorithm ay diiradda saari doonto mobilada.
Waxaa laga yaabaa in dooda ugu xoogan ee isha lagu hayo Lighthouse ay tahay, tani waa markii ugu horeysay ee Google ay dhisto qalab cabbiraadda xawaaraha is-adeegga kaas oo isku dayaya in uu dib u soo celiyo wakhtiyadii dambe ee soo-booqdayaasha goobta dhabta ah, oo ka soo horjeeda bots.
"In badan oo ka mid ah cabbirradan oo aad ka eegayso Lighthouse ayaa ugu horreyn laguu soo bandhigay adiga oo ku saabsan dhinaca isticmaalaha ee waxyaallaha," ayuu sharxay Webmaster Trends Analyst John Mueller bishii Febraayo intii lagu jiray fadhiga Xafiiska Saacadaha Hangout Su'aalaha & Jawaabaha. "Marka loo eego aragtidayada, dhinaca raadinta, waxaan isla qaadnaa cabbirradan kala duwan si aan u ogaanno sida aan u aragno goobtan xagga xawaaraha."
Anigoo waxan oo dhan maskaxda ku hayna, waxaanu soo ururinay shan talo oo kaa caawinaya inaad ka farxiso ilaahyada Google-ka xawaaraha goobtaada.
1. Fulin rarid caajis ah
Sawirrada xallinta sare waxay si weyn hoos ugu dhigi karaan wakhtiga rarista boggaaga, iyo sidoo kale kordhinta xusuusta iyo miisaanka bogga. Waxaad ka gooyn kartaa goobtaada gebi ahaanba, laakiin waxaa laga yaabaa inaad u baahato ama aad runtii rabto inaad ku sii hayso. Rarista caajisnimada waa hab lagu dedejiyo wakhtiga rarka bogga adigoon ka takhalusin mid ka mid ah macluumaadkaaga kheyraadka culus.
Marka la raro caajisnimo, kaliya qayb ka mid ah bogga shabakadda ayaa la raray hal mar-qaybta uu daawadahu eegayo ilbiriqsigaas, markaa waxaad joojin doontaa rarka qaybta xigta ilaa booqdegu hoos ugu dhaadhaco. Tani waxay yaraynaysaa wakhtiga ay qaadanayso in lagu gaadho mitirka sida Rinjiga Kowaad ee Macnaha leh iyo Rinjiga Nuxurka Kowaad, kuwaas oo ah laba ka mid ah cabbirada uu Lighthouse isticmaalo si uu u cabbiro xawaaraha goobta iyo waxqabadka.
Culayska caajiska ahi waa qasab haddii aad hirgelisay "duq-raac aan dhammaad lahayn," oo caan ku ah boggaga culculus, laakiin waxay ku caawin kartaa dhammaan noocyada mareegaha. Dhab ahaantii, madal naqshadeynta shabakadda Duda waxay ogaatay in ka dib hirgelinta culeyska caajiska ah ee goobaha ku shaqeeya Duda, guryahaas waxay arkeen celcelis ahaan 10 dhibcood kor u qaadista dhibcaha Lighthouse-waxna kama ruxin ul at
2. Ka faa'iidayso qaababka sawirka xiga ee xiga
Mid ka mid ah dambiilayaasha ugu weyn ee waqtiyada Rinjiga ugu horeeya ee qunyar socodka ah waa sawiradaada. Dhibaatadu waxay tahay marka ay timaado suuq-geynta iyo iibinta, sawirku runtii waa qiimihiisu kun kelmadood, markaa waxaad xaq u yeelan lahayd inaad iska ilaaliso inaad ka takhalusto naqshadaha kuwaas oo jecel sawirada geesiyaasha waaweyn. Iyada oo la socota loading caajis ah, qaababka sawirka soo socda ayaa bixiya xalka.
Qaababka soo socda waxaa ka mid ah JPEG 2000, JPEG XR, iyo WebP. Qaababkani waxay isku ururiyaan oo beddelaan sawirada si ay uga dhigaan kuwo aad uga yar PNG-yada caadiga ah iyo JPG-yada, laakiin saameyn xun kuma yeelanayaan tayada sawirka. Markaad isticmaasho qaababka soo socda, waxaad si aad ah u dardargelin kartaa wakhtiyada xajinta bogga, xitaa muuqaalada leh cabbirada pixels ka weyn, adigoon u hurayn tayada sawirka. Fiiri xogtan laga helay Shaybaarka Waalan ee toogtay inta ay le'eg yihiin faylasha WebP ee ka yar kuwa PNG:
Google waxay si gaar ah ugu dhiirigelisaa maamulayaasha shabakadaha inay adeegsadaan qaabaynta WebP-keeda cusub, kaas oo ay taageeraan daalacashada Chrome iyo Opera. WebP waxay soo saartaa sawirro 26% ka yar PNG, iyo 25-35% ka yar qaababka JPG.
3. Isticmaal shabakad gudbinta nuxurka
Shabakadda gudbinta nuxurka, ama CDN, waa xal weyn oo loogu talagalay in lagu dardargeliyo culeyska boggaaga, kuwaas oo ah cabbirka labaad ee ugu muhiimsan ee qiimeynta waxqabadka wanaagsan ee Lighthouse 3.0.
Asal ahaan, CDN waa shabakad adeegayaal ah oo lagu qaybiyo adduunka oo dhan oo ka wada shaqeeya sidii loo gudbin lahaa macluumaadkaaga. Sababtoo ah server-yada CDN waa kuwo juqraafi ahaan kala firirsan, mar walba waxaa jira mid ugu dhow isticmaale kasta, oo yareynaya waqtiga ay ku qaadaneyso in macluumaadkaagu gaaro browserkooda.
CDN-yadu waxay inta badan adeegsadaan xeeladaha isku-buufinta horumarsan sidoo kale, sida yaraynta iyo isku-buufinta feylasha, kuwaas oo ka caawinaya hantidaada ku jirta inay si dhakhso leh u wareejiso, oo bixisa helitaan kakooban oo wanaagsan iyo dib-u-celin, si taraafikada culus aanay u joojin waxqabadkaaga mareegahaaga. CDN-yadu aad bay ugu yar yihiin inay hoos ugu dhacaan wejiga cilladda qalabka. Bogagga nuxurka-culus ee ku tiirsan waqtiyada aadka u degdegga badan, sida Netflix, Facebook iyo Amazon, waxay isticmaalaan CDN-yada.
4. Ka takhalus plugins aan loo baahnayn
Haddii aad leedahay goob ku shaqeysa WordPress ama goob la mid ah oo ku tiirsan plugins si ay u shaqeyso dheeri ah, plugins-yadaas ayaa laga yaabaa inay yareeyaan ka jawaabista goobtaada, saameynayaan cabbirka is dhexgalka waxayna hoos u dhigayaan dhibcaha waxqabadkaaga Lighthouse 3.0.
plugins-yada qaar ayaa laga yaabaa inay muhiim u yihiin goobtaada, sida processor-kaaga lacag bixinta, laakiin kuwa kale waxaa laga yaabaa inaysan u adeegin ujeedo badan. Plugins badan ayaa weydiiya server-yada qolo saddexaad si ay u helaan macluumaadka, taas oo laga yaabo inay hoos u dhigto waxyaabaha. Sahan dhowaan laga sameeyay DigWP, in ka badan 900 xirfadlayaal WordPress ah ayaa muujiyay tirada plugins ee ay inta badan u arkaan marinka "aad u badan," iyadoo 75% jawaab bixiyaasha ay ku heshiiyeen in 25 ay tahay xadka. In ka badan saddex-meelood meel jawaab-bixiyeyaasha ayaa ku taliyay 10 inay xaddidan tahay.
Xirmooyinka dheeriga ah waxay u horseedi karaan barar keydka xogta, oo si sharaf leh u balaadhinta miisaanka goobtaada, taasoo ka dhigaysa mid aad u gaabis ah in la soo geliyo, markaa yaraantaada, ayaa ka sii fiican.
5. Ka saar xeerarka CSS ee aadan isticmaalin
Xeerarka CSS ee goobtaada ayaa lagu qeexay faylka main.css. Waxa kale oo loo yaqaan xaashida qaabka dibadda, sababtoo ah waxa si gooni ah loogu kaydiyaa HTML goobta. Si ay goobtaadu ugu shubto Rinjiga Ugu Horeeya ee Contentful, kaas oo saamayn sare ku leh waxqabadka marka loo eego nooca cusub ee Lighthouse, browserku waa inuu marka hore soo ceshado, kala saaraa, oo farsameeyaa qaab kasta oo CSS ah si loo go'aamiyo sida nuxurka loo soo bandhigi doono.
Natiijo ahaan, waa lama huraan in fayl kasta oo CSS ah oo dheeri ah uu hoos u dhigo wakhtiga rarka bogga oo uu wax yar ka beddelo waxqabadka. Fayl kasta, browserku waa inuu galo, soo dejiyaa, ka dibna kaliya ayuu samayn karaa bogga.
Yaraynta feylashaada CSS-ta iyadoo la isticmaalayo plugin sida Fast Velocity Miniify waxay wax badan ka caawin kartaa buundooyinkaaga Lighthouse, laakiin waxaad samayn kartaa wax badan si aad u hubiso in wakhtiyada culayska CSS aanay dib kuu celinayn. Ka saarista dhammaan qeexitaannada CSS ee aan la isticmaalin waxay sii dardargelinaysaa wax walba waxayna hagaajinaysaa waxqabadka mareegahaaga si loo helo qiimaynta Google ee wanaagsan.
Iyadoo la raacayo shuruudaha xawaaraha Google waxay horumarisaa waxqabadka
Horudhaca iyo horumarka socda ee Lighthouse 3.0 waa in loo arkaa xasuusin kale oo ah muhiimada ay leedahay tayaynta goobtaada iyadoo loo eegayo shuruudaha xawaaraha Google ee ugu dambeeyay. Markaad ka takhalusto xeerarka CSS iyo plugins ee aadan u baahnayn, adigoo isticmaalaya CDN-yada iyo qaababka sawirka xiga, oo ka faa'iideysanaya rarka caajiska ah, waxaad hagaajin kartaa boggaaga, yareyn kartaa wakhtiga rarista bogga, iyo hagaajinta waxqabadka si aad ugu sii jirto Google's buugaag wanaagsan.
La-taliye, khabiir ku takhasusay warbaahinta bulshada, iyo blogger fadhigiisuna yahay Tel Aviv, Gabrielle Sadeh waxay ka caawisaa sumadaha inay la wadaagaan codkooda oo ay cabbiraan ganacsigooda iyada oo loo marayo xeelado suuq-geynta dhijitaalka ah oo xooggan. Habka ugu wanaagsan ee lagula xiriiri karo iyada waa iyada oo loo marayo profile-ka LinkedIn.
Sida loo aamusiyo mawduucyada iimaylka dhibsada ee iOS 13
Gallery NextGEN: Soo bandhig, wadaag, oo iibi sawirradaada